आउँदैछ उड्ने ट्याक्सी, अब नरहने भयो ट्राफिक जामको समस्या! – Everest Dainik – News from Nepal
आउँदैछ उड्ने ट्याक्सी, अब नरहने भयो ट्राफिक जामको समस्या!
ट्राफिक जाम संसारका साना-ठुला सबै सहरको साझा समस्या बनेको छ । सीमित सडक र बढ्दो जनसंख्याको चापले त यस समस्यालाई झनै बल्झाइदिन्छ । समयभन्दा अगाडि नै हिँडे पनि समयमै गन्तव्यमा पग्ने नपुग्ने कुराको ठेगान नभएको अवस्थामा उड्ने ट्याक्सी हुँदो हो त भन्ने कसलाई नलाग्ला!
सामान्यतया: साइफाइ फिल्महरूमा मात्र सम्भव हुने यस्तो कुरा अब भने सम्भव हुने भएको छ । लक्जरी कार निर्माण गर्ने कम्पनी ‘रोल्स रोयस’ले लगभग ४ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिमा उड्ने ट्याक्सी निर्माण गर्ने समाचार आएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यसमा ५ जना यात्री बस्न सक्छन् । यस ट्याक्सीलाई एक पल्ट चार्ज गर्दा यो ८ सय किलोमिटरसम्मको दूरी पार गर्न सक्छ ।
सन् २०२० पूर्व बजारमा उतारिने भनिएको यस ट्याक्सीलाई ह्याम्पसायरमा हुने ‘एयर-सो’मा पहिलो चोटि प्रदर्शित गरिने भएको छ ।
यस ‘एयर-सो’मा विश्वका कैयन् कम्पनीहरू आ-आफ्नो उत्पादनका साथ उपस्थित रहने छन् । रोल्स रोयसले यस अघि नै हवाई जहाज, हेलिकप्टर र पानी जहाजका इन्जिन बनाइसकेको छ ।
रोल्स रोयसका अनुसार यो ट्याक्सीमा एम-२५० ग्यास टर्बाइनको प्रविधिको प्रयोग गरेर ५ सय किलोवाट उर्जा निकालिनेछ, जसले यस वाहनलाई उड्न मद्दत पुऱ्याउने छ ।
कम्पनीले यसमा अवाज नआउने इन्जिन प्रयोग गरिने जनाएको छ । यसमा हाइब्रिड डिजाइन भएको हुँदा यसलाई बारम्बार चार्ज गरिराख्नु पर्ने छैन । यसका पखेटा ९० डिग्रीसम्म घुम्न सक्ने खालका हुनेछन्, जसले गर्दा यो ट्याक्सीलाई सोझै उडाउन र अवतरण गर्न सकिने
ट्याग्स: उड्ने ट्याक्सी, ट्राफिक जाम, रोल्स रोयस